मिस नेपाललाई घोडा सिकाउँदै राजेन्द्र खड्गी, (भिडियो) – Tufan Media News
मिस नेपाललाई घोडा सिकाउँदै राजेन्द्र खड्गी, (भिडियो)
१५ पुष २०७७, बुधबार १२:०४
द्वन्द निर्देशक एवम् नेपाली फिल्मका चर्चित भिलेन राजेन्द्र खड्गीले ‘रजतपट’मा प्रकाश सुवेदीसँग दिएको अन्तर्वाताले सामाजिक संजालमा खुब चर्चा पायो । ट्रोलदेखि टिकटकसम्म बने ।
टिकटक गरेवापत फिल्म उपहार पाएकी रुबी शनिबार खड्गीसँग काठमाडौं, गोकर्णेश्वरस्थित हर्स स्टेबलमा घोडा दौडाइरहेको भेटिइन् । घोडा सिक्ने क्रममा के–के भयो ? खड्गीले रुबीलाई किन र कसरी घोडा सिकाए ? बाकी कुराकानी हेर्नुहोस भिडियोमा: